Waligaa ma noqon doontid khasaaro ilaa aad ka joojiso isku dayga. - Mike Ditka - xigasho Pedia
Waligaa ma noqon doontid khasaaro ilaa aad ka joojiso isku dayga. - Mike Ditka
Majirto run ka weyn xaqiiqda ah in shaqada adag markasta dib u hesho faa'iidadeeda. Noloshu waxaa ka buuxa kor iyo hoos. Helitaanka waxa aad rabto ama aad rajeynaysid waxaa laga yaabaa inaysan sahlanaan. Taas micnaheedu maahan inaan is dhiibno. Adiga oo adkeysi dulqaad leh iyo sii wadashaqeynta adag ayaa ka caawisa gaarista himiladaada.
Khasaare ma lihid haddii aad hadafkaaga gaadhay. Laakiin xaqiiqdii waxaad tahay qof guuldaraystay haddii aad joojisid iskuday. Mid ayaa laga yaabaa inuu dareemo inay xadidan tahay tirada aad isku dayi karto. Laakiin runtu waxay tahay inaan u baahanahay inaanu xadidanno.
Dabcan, caqli-galnimada xaaladda waa in la cabbiraa, laakiin waxaan u baahanahay inaan fahamno haddii hal albaab uu xiro albaab kale inuu furmo. Hadafkayaga aan ku gaarno wax waa inaan la yarayn. Waa inaan awoodno inaan raadino fursado cusub had iyo jeer si aan nolosha hore ugu sii soconno.
Waxyaabaha aad u aragto inaad tahay khasaare waa wejiyada nolosha oo kaliya oo aad xaqiiqdii ka adkaan doonto haddii aad isku daydo. Sidaa darteed, waligaa ha is dhiibin naftaada oo rajooyinkaaga sare u qaad. Niyad wanaaggu wuxuu nagu xoojiyaa tamarta si aan si ka wanaagsan wax u qabanno. Waxaan markaa aragnaa nalka dhamaadka tunnel-ka oo waxaan bilaabeynaa inaan ka shaqeyno dhinaca.
Weligaa qofna ha u oggolaan inuu kuu sheego inaad luntay. U sheeg inaad heli doonto wado aad uga baxdid oo aad u qaadatid inay caqabad ku tahay inaad sida ugu wanaagsan wax u qabato. Adiga ficillada ayaa ka dheereeya ereyada inbadanna waxay kaa eegi doonaan adkaysigaaga.
Xigashooyinka dhiirigalinta ugu wanaagsan
Ha Joojin Quotes
Xigashooyinka caanka ah ee ku saabsan iskudayida
Quotes Short caan ah
Dhiirrigelinta xigashooyinka Isboortiga
Waligaa Ha Bixin Rabitaanka
Waligaa Ha Quusin Quusin
Marna Ha Joojin Quotes
Marna Soo xigasho
Marna Ha Joojin xigashooyinka
Xigashooyinka ku saabsan iskudayidda waxa ugu fiican
Xigashooyinka gaagaaban ee gaaban
Xigashooyinka Ciyaaraha Gaaban
Guul Vs Loser Quotes